Diksionera Little Designer's: Ebook maimaim-poana | Famoronana an-tserasera
Misy ebook an-jatony sy loharano mahaliana an-jatony ao amin'ny Internet izay mety ho tena ilaina. Ohatra tsara ny Diksionera kely an'ny Mpamorona, izay ho an'izay rehetra manomboka amin'ity sehatra ity dia tena atoro anao. Ity ebook ity dia misy teny maro be momba ny fahaizana manokana amin'ny famolavolana sary (typografia, famolavolana editorial, famolavolana tranonkala, photomanipulation ...) ary koa misy ohatra sy singa sary marobe toy ny sary izay mahatonga azy ho mora vidy tokoa. Imbetsaka isika rehefa mamaky boky, mijery lesona an-tsary na mihaino mpiara-miasa iray miteny fotsiny dia mila manampy an'io fampahalalana io mba hahatakarana ny hafatra amin'ny ankapobeny. Soso-kevitra ihany koa ny tokony hijerenanao maso tsy tapaka raha toa ka ny zavatra tadiavinao dia ny fanitarana ny fahalalanao ary ho tonga manam-pahaizana manokana amin'ny sehatra.
Avelako ho anao ny rohy fampidinana sy teny fampidirana telo izay miseho ato amin'ity rakibolana ity ary tena nahaliana ahy izany. Tsy misy intsony ny milaza, Ankafizo!
"Ny mpamorona, tsy toy ny mpanakanto, tsy mazàna no loharanon'ny hafatra ampitainy, fa ny mpandika teniny." -Jorge Frasikara
«Ny famolavolana dia ny fomba fampiraisana ny endrika sy ny atiny. Tsotra ny endriny, ka izay no mahasarotra azy. " -Paul rand
Rehefa miasa amina olana iray aho dia tsy mieritreritra ny hatsarany mihitsy. Mieritreritra ny fomba hamahana ilay olana fotsiny aho. Fa rehefa vitako izany, raha tsy tsara tarehy ny vahaolana dia fantatro fa tsy mety izany. " -Richard Buckminster Fuller
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Diksionera kely momba ny endrika: Ebook maimaim-poana
Dani Santi dia hoy izy:
Tena tsara, sady mianatra no mampatsiahy.
Valiny tamin'i Dani Santi